जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर एक पटक अवस्य पढ्नुहोला ! – Sidha Kura
त्यसैले , यता उताबाट धेरै सम्पत्ति जम्मा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । राम्रोसँग कमाउनुहोस् , राम्रोसँग खानुहोस् , र राम्रोसँग सुत्नुहोस् । जिबनमा आइपर्ने हरेक चुनौतिलाई स्विकार गर्नुहोस् । / आफुलाई मनपर्ने सामनको लागि खर्च गर्नुहोस् ।/ यति हाँस्नुहोस कि तपाईंको पेट नै दुखोस । / तपाईं जति नै नराम्रो नाच्नुहुन्छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यदि यि माथिका लेखहरु मनमा छुयोभने जवाफ दिनुहोस्। / नत्र त म बिना जवाफमा पनि खुशी छु. सुदुर समाज / सामाजिक सञ्जाल बाट ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
मंसिर महिनामा यी ३ ग्रहको बन्यो अचम्मको संयोग, यी राशिलाई मिल्नेछ निकै लाभ